एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट ह्याक : कर्मचारीमाथि शंका - एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट ह्याक : कर्मचारीमाथि शंका
नेपालबहस संवाददाता २०७४, ७ कार्तिक 222 Views
७ कात्तिक, काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट ह्याकगरी विदेशी बैंक खातामा रहेको ४१ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानीका लागि अर्डर भएको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। उक्त रकममध्ये १० करोड भुक्तानी भइसकेको र बाँकी ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्डर मात्रै भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
एनआईसी एसिया बैंकले स्विफ्ट ह्याक गरी रकम विदेश पठाएको जानकारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि अुनसन्धान थालेको हो। राष्ट्र बैंकको टोलीसँगै एनआईसी एसिया बैंकले पनि अनुसन्धानका लागि भारतबाट विज्ञ झिकाएको छ। राष्ट्र बैंक र एनआईसी एसिया बैंक दुवैले औपचारिक रूपमा घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा स्विफ्ट ह्याक गरेर विदेशमा रकम पठाएको यो पहिलो घटना भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजाका दिन ह्याकरले स्विफ्ट ह्याक गरी भुक्तानीका लागि विभिन्न ६ देशमा अर्डर गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित देशका केन्द्रीय बैंकलाई ह्याकरले अर्डर गरेको रकम भुक्तानी नगर्न पत्राचार गरिसकेको छ। साथै, भुक्तानी भइसकेको रकम पनि फिर्ता गराउन आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले अन्नपूर्णसँग बताए।
स्विफ्ट ह्याक गरेर रकम चोरी गर्न खोजिएका अमेरिका, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, मलेसियालगायत देशका केन्द्रीय बैंकलाई राष्ट्र बैंकले प्रक्रियामा रहेको अर्डरको भुक्तानी नगर्न र भुक्तानी भइसकेको रकम पनि फिर्ता गराउन पत्राचार गरिसकेको सहप्रवक्ता पण्डितले बताए। एनआईसी एसिया बैंकले पनि अर्डर गरिएको रकम भुक्तानी रोक्न सम्बन्धित देशलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
‘स्विफ्ट ह्याकका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ, अझै यकिन विवरण आइसकेको छैन, मंगलबार बेलुकासम्म सबै विवरण आउला –पण्डितले भने। राष्ट्र बैंक भुक्तानी भइसकेको रकम पनि फिर्ता गर्न प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय भुक्तानी फिर्ता भइसकेको पनि खबर आएको छ, राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ –उनले भने। भुक्तानी भएको कतिपय रकम संस्थाको नाममा गएकाले फिर्ता लिन सकिने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। केही समयअघि बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशमा पनि स्विफ्ट ह्याक गरी मोटो रकम चोरी भएको थियो। यसमध्ये अधिकांश रकम फिर्ता भएको थियो।
‘केही कर्मचारीको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखियो, हामीले ती कर्मचारीई विशेष निगरानीमा राखेका छौं, उनीहरूको विदेशी बैंकमा खाता छ कि छैन ? यसअघि कारोबार भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं –राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
एनआईसी एसिया बैंकमा स्विफ्ट ह्याक गरी रकम विदेश पठाएको सार्वजनिक भएपछि निक्षेपकर्ता अलमलमा छन्। तर राष्ट्र बैंकले स्विफ्ट ह्याक भए पनि बैंकका निक्षेपकर्तालाई कुनै पनि असर नपर्ने सहप्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिए। ‘यो स्विफ्ट ह्याकले बैंकको कारोबार पनि रोकिँदैन, निक्षेपकर्ता पनि डराउनुपर्दैनु, उनले भने, ‘बैंकमा निक्षेप राख्ने ढुक्क भए हुन्छ।